Mamelona Ny Tontolo Bangla Ny Fivavahana Sy Ny Lanonana · Global Voices teny Malagasy
Mamelona Ny Tontolo Bangla Ny Fivavahana Sy Ny Lanonana
Voadika ny 06 Aogositra 2017 4:02 GMT
(Marihina fa tamin'ny 28 Septambra 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Nandrasana fatratra izao vanim-potoana izao ho an'ireo Bengali manerana izao tontolo izao. Izay fotoana hanaovam-bavaka, ny fanasana sy ny fifadian-kanina. Raha ho an'ny Miozolomana kosa dia izany no volana masin'ny Ramzan (na Ramadany araka ny hiantsoan'ny faritra sasany azy eto amin'izao tontolo izao), mankalaza ny Durga Puja ny Haindò. Tsy mahagaga noho izany, raha miresaka momba ny fivavahana, ny fomba fanao isan-karazany, ny dikany sy ny fihetseham-po manoloana izany ireo bilaogera Bangali.
Ao anatin'ny Ramzan ny ‘Sawm’ [fifadian-kanina amin'ny teny arabo], izay lazain'ny Bengali hoe ‘Roja’. Manoritsoritra ny fototra niavian'ny teny hoe ‘Roja’ i Fazle Ilahi , ary manazava ny dikan'ny fanaovana ny fifadian-kanina ara-pivavahana izy. Miresaka momba ny maha-vanim-potoanan'ny fanombatombanan-tena, ny fandinihana lalina sy ny fanadiovana i Sayeed Abdullah. Na izany aza, volana iarahana amin'ny namana sy ny fianakaviana amin'ny hariva hisakafo Iftaar ihany koa ny Ramzan. Indrisy anefa fa amin'ny vanim-potoana ankehitriny dia lasa raharam-barotra amin'ny lafiny sasany ny Iftaar ary manontany tena i Addabaj raha toa ka tsy araka ny natiora maontin'ny Ramzan intsony ity fanasana mahasaropiaro loatra ity .
Fa ho an'ny ankamaroan'ny Bengali, mazàna mirona mankany amin'ny heviny ara-pivavahana ny fankalazàna ny Durga Puja ara-kolontsaina, ary araka ny tokony ho izy ny fombafomba ara-pivavahana anatanterahana izany. Ao Kolkata, ny pujas ‘baroari’ (-mbahoaka) ankehitriny dia maneho famoronana ara-javakanto bebe kokoa ary mirona amin'ny fanarahana “lohahevitra”. Misy ihany koa ny fifaninanana sy ny mari-pankasitrahana avy amin'ny orinasa. Ny vokatr'izany dia mahavariana ny mpitsidika ireo ‘pandals’ (toerana) isankarazany hazavain'ny jiro maoderina, ny fanaingona ny efitrano sy ny sarin'ireo andriamanibavy. Miresaka momba ny fifaliana tsy azo halaitahaka izay iainan'ny Bengali amin'ny fiavian'ny Pujas sy ny tamberin'ny Tushon i Bongonari. Mazava ho azy, araka ny nolazain'i Bongopondit, angamba ao anatin'ny heriny indrindra ho an'ny Bengali, izay miaina ny vanim-potoana lavitra an'i Bengal, ity fampahatsiahivana ity. Ho azy ireo, na dia eo aza ny fankalazana ny pujas ao amin'ny firenena na fonenana misy azy ireo, dia angamba tsy mitovy amin'ilay fahafahana mankalaza izany miaraka amin'ny namana sy ny fianakaviana any an-tanindrazana intsony izany.
Fampandrosoana 20 Novambra 2021